Kenya oo beenisey hadal ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya. - Haldoornews
Kenya oo beenisey hadal ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya.
Afhayeen u hadley ciidamada dalka Kenya ee loo yaqaan KDF ayaa inkiray isla amrkaana beeniyey hadal ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud xilli uu warfidiyeenka ugu waramaayey magaalada Istanbul.
“…Madaxweynaha Soomaaliya waa in uu ku jiraa kooxda al-Shabaab. Tirada uu sheegay waa wax ka baxsan ciidankii deganaa Ceel Cadde…”
Daawo Hoobiye ku soo Dhacay Xaafad ku Taala Magaalada Muqdisho oo Dillay Qoys Guri ku wada Noolaa.
Musharrax Xildhibaan- Mustafe X. Adam Harun oo Bulshada Somaliland Katacsiyeeyay Shilkii Naxdinta lahaa ee Maanta Kadhacay Deegaanka Gabiley